အသံ - သတိပေးချက် - B787 အပေါ်ပိတ်ထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မေးခွန်း အသံ - သတိပေးချက် - B787 အပေါ်ပိတ်ထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1 months ago 10 တစ်နှစ် - 1 months ago 10 တစ်နှစ် #475 by FlyingFranz
ကိုယ့် Ricoooo ထံမှ B787 Dreamliner ကို download ပြုလုပ် installed ။
ငါကအခြားလေယာဉ်နှင့်အတူဤပြဿနာမရှိကြပါဘူး။ သူတို့ဟာမျှသာ (အောက်ပိုင်းညာဘက်။ ) မျက်နှာပြင်ပေါ်သတိပေးချက်ပြသ
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ် 10 months ago နေဖြင့် FlyingFranz.
1 months ago 10 တစ်နှစ် #476 by Gh0stRider203
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Eh, အထောက်အကူဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သူတို့ကိုတွေ့ပါ?
ထို့နောက်တဖန်ငါ "ခွေးဘက်တီ" ၏အတိအကျဆုမွန်ကောင်းဘူးကြိမ်အရမ်းရယ်ရတယ်ရှိပါတယ်
က hard မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့်အထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံများအတွက်အသံဖိုင်တွဲ Goto နှင့်လေယာဉ်ပျံများအတွက် sound.cfg file ကို edit, "ဖိုင်အမည် = တိတ်ဆိတ်" ကိုတည်ဆဲဖိုင်အမည်ပြောင်းလဲနေတဲ့
ဒါကကျနော်မရောက်မီကဒီကြိုးစားခဲ့ဖူးပါဘူးအဖြစ်အရမ်းရယ်ရတယ်ကြောင်းပေါ်ငါ့ကိုကိုးကားကြဘူး, ငါထင် ... အဲဒါကိုဖြေရှင်းသင့်တယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: FlyingFranz
1 months ago 10 တစ်နှစ် #477 by FlyingFranz
ငါကောင်းသောအဘယ်သူမျှမ ... ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်!
ဒီအထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံများအတွက် sound.cfg ဖိုင်ထဲမှာမပါမျြးအခနျးကွီး "အသံသတိပေးချက်" ရှိပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ငါကအခြားဆင်တူဖိုင်တွေနှင့်အတူဤ sound.cfg file ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
1 months ago 10 တစ်နှစ် #478 by Gh0stRider203
တကယ်တော့ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွင်, VA သို့အတွက်ရှိခြင်းတန်ဖိုးရှိမယ့်သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့များအတွက် 787 ပျံသန်းကြပါဘူး။ ငါ့အဘို့ပြုလုပ်ငွေရှာအကြောင်းကိုအားလုံးင်နှင့် 787 (ကြှနျုပျတို့ရှိပါတယ်) 772LR ကဲ့သို့တူညီသောအကွာအဝေးမှအနီးကပ်ရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်သင်ဤပုံရိပ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကခရီးသည်၏တူညီသောအရေအတွက်ကသာမဆောင်ရွက်နိုင် .. .which သည့် VA သို့များအတွက်လျော့နည်း $ ကိုဆိုလိုသည်။
1 months ago 10 တစ်နှစ် #498 by Tonny0909
ရုံ simobjects / လေယာဉ် / planename / အသံအပေါ်သူတို့အား wav- ဖိုင်တွေရှာသောသူတို့အားဖျက်ပစ်ပါမည်။ ဥပမာ "callout100.wav" စသည်တို့ကို
1 months ago 10 တစ်နှစ် #499 by FlyingFranz
, Tonny0909 မင်္ဂလာပါ
သို့ရာတွင်ထိုသို့နှောင့်အယှက်ကြောင်းသူ့ဟာသူအသံ, ဒါပေမယ့်ဒီအထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံပေါ်အားပိတ်ပြီးမရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ FSX အောက်မှာအခြားလေယာဉ်နှင့်အတူပြဿနာမရှိကြပါဘူး။
အဆိုပါ B787 ဖိုင်တွေအတွက်ဤသတိပေးချက်အသံတောင်းဆိုတစ်ခုကုဒ်လည်းမရှိ။ ဥပမာအားဖြင့်နွယ်ဖွားသာအနည်းငယ်လည်းမတ်စောက်သည်, လျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကတပ်လှန့်နှုန်းမှန်ကန်လျှင်တောင်မှအသံအများစုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါလုပ်နိုင်အားလုံးသည်အဓိက "အသံ" folder ကိုအတွက်ဆက်စပ်ဖိုင်တွေအတွက်အသံ level ကိုလျော့ချခဲ့ (10000 ဆင်း 6000 ကနေ။ )
4 လအတွင်း4weeks ago #1211 by FlankerAtRicoo
အဆိုပါ [gpws] က aircraft.cfg အတွက်သုံးပါ
အဘယ်သူမျှမ [GPWS] အပိုင်းလည်းမရှိဆိုပါကယ့်တဦးတည်းဖန်တီးပါ။
ဤအပိုင်းကိုမြေပြင်နီးကပ်သတိပေးစနစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို sepcifies ။
သတိပေး activated သောအောက်ကအမြင့် max_warning_height ။
လေယာဉ်သတိပေး activated ဖြစ်ပါတယ်နွယ်ဖွား၏ဤနှုန်းသည်ထက်ကျော်လွန်ပါလျှင် sink_rate_fpm ။
လေယာဉ်အရေးပေါ်သတိပေး activated ဖြစ်ပါတယ်နွယ်ဖွား၏ဤနှုန်းသည်ထက်ကျော်လွန်ပါလျှင် excessive_sink_rate_fpm ။
လေယာဉ် takeoff စဉ်အတွင်းဆင်းမှစတင်သည်နှင့်နွယ်ဖွား၏ဤနှုန်းသည်ထက်ကျော်လွန်တဲ့သတိပေးသည်ဆိုပါက climbout_sink_rate_fpm
သတိပေး activated ဖြစ်ပါတယ်။
; // ဒီကို 'နစ်မြုပ်ကြဘူး' 'Diables' 'သိပ်နိမ့်ခတ်' စသည်တို့ခေါ်ဆိုခတနေရာ
; // ၏ Courtesy & ရော့ Barendgret မှကျေးဇူးတင်ပါသည်
0.326 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်